Seychelles dia nanova ny fameperana ny dia ho an'i India, Pakistan ary Bangladesh
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Seychelles dia nanova ny fameperana ny dia ho an'i India, Pakistan ary Bangladesh
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafanina ao Bangladesh • Vaovao Mafana • Madagascar Malgache Vaovao • Madagascar Malgache Gasy News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Seychelles Public Health Authority dia nanambara ny fepetra fitsangatsanganana vaovao
Seychelles dia nanambara ny fepetra fitsangatsanganana vaovao ny talata 20 aprily 2021, taorian'ny fitomboan'ny valanaretina tany amin'ny firenena maro.
Misy vokany eo no ho eo ny mpitsidika avy any India, Pakistan, ary Bangladesh izay mankany Seychelles.
Ireo mpitsangatsangana dia avela hiditra rehefa avy naka fatra roa, ary farafahakeliny roa herinandro dia lasa taorian'ny fatra farany.
Ny kopian'ny taratasy fanamarinana dia tokony aseho rehefa mangataka fahazoan-dàlana momba ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana (HTA) ao amin'ny www.batrice.govtas.com.
Ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy mandeha amin'ny Seychelles ary angatahan'ny orinasa fiaramanidina amin'ny fisavana; tsy avela hiditra amin'ny sidina ny mpitsidika raha tsy izany.
Ny mari-pankasitrahana momba ny vaksiny dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny fanamarinana sy fankatoavana avy amin'ny Fahefan'ny Fahasalamam-bahoaka rehefa miditra eto amin'ny firenena.
Ho fanampin'izany, i Brezila izao dia nampiana ho ao amin'ny lisitry ny firenena tsy mahazo mandeha amin'izao fotoana izao mankany Seychelles, miaraka amin'i Afrika Atsimo. Na izany aza, io lisitra io dia mbola iharan'ny fanitsiana satria mivoatra ny tahan'ny aretina ankehitriny.
Ampahatsiahivina ny mpitsidika fa tsy maintsy manana fiantohana ara-pahasalamana ara-pahasalamana izy rehetra handrakofana ny vidin'ny COVID-19 mety hitranga mandritra ny fijanonany any Seychelles.
Raha mila fampahalalana fanampiny momba ny fitsangatsanganana any Seychelles dia tsidiho www.advisory.seychelles.travel